मधेशका मुख्यमन्त्री राउत उपर संकट 'रेखा'
‘रेखा थापालाई एम्बेष्टरको रुपमा ल्याउनु के बाध्यता थियो ? मधेशमा त्यस्तो अरु कोही छैन ?
१३ मङ्सिर, २०७५ | जनकपुरधाम || प्रकाशित ०७:४५:००
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री योजना अन्तर्गत ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा नेपाली फिल्म जगतको नायिका रेखा थापा जोडिएपछि प्रदेशका सांसदहरुले संसदमा चर्को विरोध गरेका छन् ।
बुधवार प्रदेश २ को दोश्रो अधिवेशन अन्तर्गत बसेको ४२ औं बैठकमा सांसदहरुले बोल्दै तराई मधेशको जिल्लामा कुनै कालाकार वा अभिनेत्री नभए जस्तो रेखा थापालाई लयाएर ब्राण्ड एम्बेष्डर बनाएको आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा ८१ करोड बजेट ल्याएर नीजि कार्यक्रम जस्तै सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाए। उनले मधेशका दलित तथा पिछिडिएका महिलाहरु बस्तिमा रेखा थापाको नाम, भाषा, तथा अनुहार नै नमिल्ने भएकोले तत्काल त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद मनोज कुमार सिंहले देशकै सबैभन्दा पुरानो शहर राजविराजलाई सडक विस्तारको नाममा शहर नै विस्थापित हुने विकासबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ५०– ५० फिट सडक विस्तार हुँदा सम्पुर्ण संरचनाको विध्वंश हुने भएकोले तत्काल त्यसलाई रोकी रिङ्गरोडको स्थापना गरी सहायक र राजमार्गसंग जोड्न माग गरे ।
सारदा शंकर प्रसाद साहले पर्साको क्षेत्र नं. ४ (ख) मा विकास निर्माणको काम नभएको गुनासो गर्दै भएको सामुदायिक विद्यालयमा समेत प्रावि शिक्षकले मावि कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।
उनले भने, ‘विकास विकास हामी हल्ला गर्छौ, तर शिक्षा नै भएन भने कुनै विकास काम लाग्दैन । प्रावि शिक्षकले मावि कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउछ, अनि हामी विकास कुरा गर्छौ ।’ भन्दै सरकारलाई तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद बाबुलाल साहले नायिका रेखा थापा ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ एम्बेष्टर नभएको तथा उनले आफै मुख्यमन्त्री कार्यक्रम मन परेर सघाउन आएको स्पष्टिकरण दिए । उनले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको बचाउँ गर्दै प्रदेश १ सय ७ सांसद र जनताको अभियान भएकोले सबैले सफल बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सांसद नरेश कुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा अभिनेत्री रेखा थापालाई सरिक गराएको भए त्यसलाई सच्चयाईनुपर्ने माग गरे। उनले मधेशमा समेत थुपै्र अभियानी एवं समाज कल्याणका लागि गर्ने महिला सक्षम भएकोले यही क्षेत्रका महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउन माग गरे ।
नेकपाका सांसद डिल्ली प्रसाद उप्रेतीले अन्तरािष्ट्रय विमान स्थललाई २५ लाख रुखको नाममा प्रोपोगण्डा मच्चाएर अन्त्यै लैजान खोजेको खेल भईरहेकोले तत्काल संसदीय छानवीन समितिको माग समेत गरे । उखु किसानलाई वर्षेनी भुक्तानी नदिएर समस्या दिदै आएको र किसानको उखु काट्ने चटारो आएपनि मिल चलाउने कुनै सुरसार नगरेकोले किसान मारमा पर्ने समस्या आएको बताए ।
उनले प्रदेशभरिमा रहेका ८ वटा उखु चिनिमिललाई सञ्चालन गरी टरबाईनबाट ६० मेगाावाट सम्मको विजूली उत्पादन सक्ने क्षमता भएकोले त्यसको वातावरण मिलाउन सरकारसंग आग्रह गरे । संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद चमेली देवी दासले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा प्रदेश सम्पुर्ण सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत संलग्न गराउन माग गरे ।
उनले महोत्तरीमा रातू, जंगहा, मरहा, विग्ही लगायत नदीको पानी वर्षेनी रुपमा गाउँ बस्तिमा प्रवेश गर्दा गरिब विपन्नको विच्चली हुने गरेको सुनाउँदै रातू संघीय सरकारको रातू तटबन्ध योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनको माग गरिन् ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरस्वती चौधरीले धनुषाको क्षेत्र नं. २ मा जनताले अहिले पनि विजूली बत्ति बाल्न नपाएको तर मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो जिल्लामा मन्त्रीमुखी बजेट तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताले एक–सुक्को पनि नपाएको आरोप लगाइन् । उनले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानको सन्दर्भमा बोल्दै भनिन् ,‘रेखा थापालाई एम्बेष्टरको रुपमा ल्याउनु के बाध्यता थियो ? मधेशमा त्यस्तो अरु कोही छैन ?
उनले मुख्यमन्त्रीको अभियानका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला संयोजक छनोट गरिएपनि गोप्य किन राखिएको भन्दै प्रश्न गरिन् । नेकपाकी सांसद ज्वाला कुमारी साहले प्रदेश २ को संसद अहिल्यै पनि समयमै किन सुरु हुन नसकेको सभामुखसंग प्रश्न गरिन् ।
उनले संसद एउटा गरिमामय स्थान भएपनि एक दलले अर्को दलमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएको बताउँदै विकासे निर्माण विषयमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि आरोप प्रत्यारोपमा अल्झिएको बताईन् । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको ४ करोडको कार्यविधिलाई जस्ताको त्यस्तै सारेर प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भनिन् ‘मुख्यमन्त्री ज्यूको अभियान सराहनीय भएपनि बजेट दुरुपयोग भईरहेको संसदमा प्रश्न मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने जवाफ सांसदले फर्काईरहेकोमा आश्चर्य प्रकट गरिन् । उनले अभियानमा प्रदेशको मानिसलाई वाईपास गरिअन्य ठाउँको मानिस प्रोत्साहन र यहाँकालाई अपमान गरेको आरोप लगाईन् ।
यसैगरी राजपाका सांसद रानी शर्मा तिवारीले मुख्यमन्त्री ज्युले ब्राण्ड एम्बेष्डरको रुपमा नियुक्ति गरेको भए त्यसलाई खारेजीको माग गर्दै मधेशको महिला राख्नुपर्नेमा जोड दिईन् । जनकपुरधामबाट प्रकाशित हुने आजको न्यूजपेपर दैनिकमा समाचार छ ।